मन्त्रिपरिषद् विस्तार : पटक-पटक चुनाव जितेर पनि मन्त्री नबनेकालाई रोजिएला कि वरिष्ठ र निकटलाई? – NepalayaNews.com
सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि सुल्झिएसँगै अब मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा सुरु भएको छ।
‘काठमाडौंमा मन्त्री हुनका लागि लिगलिगे दौड सुरु भइसकेको छ,’ भोजपुरमा रहेका किराँतीले टेलिफोनमा नेपालखबरसँग भने, ‘म त्यो रेसमा छैन। सांसद हुने बित्तिकै मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। मजस्तै योग्य अन्य पनि छन्।’
किराँतीको जस्तै सहज धारणा सबैको भने छैन। मन्त्री हुने दौडमा रहेका सांसदहरु औपचारिक टिप्पणी गर्न रुचाउँदैनन्।
‘लगातार दुईपटक जितिसकियो। मतदाताको पनि अपेक्षा हुन्छ। तर पालो आउने होकी होइन थाहा छैन,’ एक सांसदले भने।
त्यसैगरी भुसाल २०५६ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भुसाल वागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएका हुन्। नेपालखबरबाट
चीनको आक्रामकता बढ्दै जाँदा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन बढ्दै ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १४:४६
टिकटक माथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १४:४६
अर्बौका मालिक ट्रम्पमाथि कर छलेको आरोप, एक दशकसम्म तिरेनन् आयकर ! ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १४:४६